एम्बुलेन्सदेखि बैंकको पहल - Pradesh Today एम्बुलेन्सदेखि बैंकको पहल - Pradesh Today
विजौरी उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्वका लागि यही फागुन ८ गते चुनाव हुन लागेको छ । संघमा आवद्ध ४ सय ६२ मतदाताले संघमा अबको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछन् । नयाँ नेतृत्वका लागि त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको छ ।
प्रजातान्त्रिक प्यानल, बामपन्थी प्यानल र स्वतन्त्र गरी त्रिपक्षीय भिडन्त हुन लागेको छ । तीनै प्यानलका उम्मेदवार चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।
तीनवटै प्यानलका उम्मेदवारले व्यवसायीको हकहितका लागि विभिन्न एजेण्डा अघि सारेका छन् । तीनवटै प्यानलका उम्मेदवारले जित्ने दाबी गरिरहेका छन् । चुनावको दिन नजिकिदै जाँदा बिजौरीमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ ।
आजको प्रदेश टुडेको राउण्ड टेबलमा बिजौरी उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावमा होमिएका उम्मेदवारलाई समेटेका छौं । उम्मेदवारका एजेण्डा के कस्ता छन् ? कुराकानी सार संक्षेपमा ।
व्यवसायीको हकहितका लागि स्थापना गरिएको संस्था विजौरी उद्योग वाणिज्य संघमा आगामी कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्वका लागि मेरो उम्मेदवारी परेको छ ।
म अहिलेसम्म संघमा महासचिवको रूपमा काम गरिरहदा सम्पूर्ण व्यवसायीले अध्यक्ष पदका लागि निकै आग्रह गर्नुभयो । सम्पूर्ण व्यवसायीको हक र हितका लागि संघमा नयाँ नेतृत्वमा आउनका लागि हामी चुनावी मैदानमा आएका छौँ ।
चुनावमा जित वा हार अवश्य हुन्छ तर व्यवसायीले हामीमाथी थुप्रै आशा र अपेक्षा गरेका पनि चुनाव हाम्रो पक्षमा आउँछ कि भन्नेमा आशावादी छौँ ।
विजौरी उद्योग वाणिज्य संघ केही वर्षअघि मात्रै स्थापना भएको संस्थामा अहिले करिब ४ सयभन्दा बढी व्यवसायीहरू जोडिनुभएको छ ।
हाम्रो मुख्य एजेण्डा भनेकै विजौरीलाई ‘राम्रो विजौरी, हाम्रो विजौरी’ कसरी बनाउन सकिन्छ ? भन्ने सोंचका साथ चुनावी मैदानमा होमिएका छौँ । देखिएका सम्भावनालाई अवसरको रूपमा लिई विजौरीको सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि हाम्रो प्यानल चुनावी मैदानमा उत्रिएका छौँ ।
हामी नेतृत्वमा आएपछि विजौरी बजारलाई व्यापारीक केन्द्र बनाउन विषेश पहल गर्नेछौँ । बजारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि प्रहरीको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन पहल गर्नेछौँ ।
विषेशगरी हेमन्तपुरमा रहेको प्रहरी चौकीको स्तरोन्नती गरी विजौरी बजारमा शान्ति सुरक्षाका लागि पहल गर्ने, बढ्दै गएको जनघनत्वलाई मध्यनजर गरी ट्राफिक नियम र बजारमा पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउने योजना हामीहरूको छ ।
त्यसैगरी विजौरी क्षेत्रका नागरिकको यातायातमा सहजता ल्याउनका लागि यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरेर नगर बस सञ्चालन गर्नका लागि पहल गर्नेछौँ ।
यसले पनि विजौरीलाई व्यापारीक केन्द्र बनाउन सहयोग पुग्नेछ । त्यसैगरी बजारलाई सुन्दरता बढाउनका लागि सरसफाई अभियानलाई थप व्यवस्थित बनाएर हाम्रो विजौरी राम्रो बिजौरीको अभियानलाई सार्थक बनाउने छौँ ।
त्यसैगरी विजौरीमै ‘क’ वर्गको बैंक स्थापना गरी व्यवसायी तथा ग्राहकलाई थप सहजता प्रदान गर्ने र निरन्तर व्यवसायीको हकहितका लागि निरन्तर लागि रहने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ ।
विजौरीमा थुप्रै सम्भावना हुँदा पनि विजौरी बजार फस्टाउन नसकिरहेको यर्थातता हो । उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायिक छाता संगठन भएका कारण पनि यस क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्नेछौँ ।
उद्योग वाणिज्य संघले यसक्षेत्रका नागरिकको सहजताका लागि एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । सम्पूर्ण व्यवसायीको सहयोगले हामी नेतृत्वमा पुगिसकेपछि यो योजनाले पनि सार्थक पाउने छ ।
विजौरीमा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि कृषि पकेट क्षेत्रका साथै किसानलाई पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्नका लागि पनि हाम्रो विशेष पहल रहने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
त्यसैगरी विजौरीको विकासका लागि यस क्षेत्रमा मेला महोत्सवका साथै महायज्ञ सञ्चालन गरिने, धार्मिकस्थलहरूको खोजी गरी सम्भावना बोकेका धार्मिकस्थलको प्रचारप्रसारमा सहयोग पु¥याउन विभिन्न किसिमका कार्यक्रम अघि सारिने छ ।
उद्योग वाणिज्य संघले सभाहल सहितको भवन निर्माण गर्ने प्रमुख योजना पनि अघि सारेको छ । त्यसैगरी विजौरी बजारलाई उज्यालो बनाउनका लागि सोलार बत्ती जडान प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने, संघले हरेक वर्ष चैते अष्टमीमा मनाउँदै आएको पूजापाठ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनेछौँ ।
संघमा हामी अहिले विभिन्न प्यानलका माध्यमबाट चुनावमा होमिए पनि नेतृत्वमा चयन भइसकेपछि हामीले सम्पूर्ण व्यवसायीलाई समान किसिमले हाम्रा कार्यलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु । राजनीतिक हिसावले कोहि पर, कोहि वर भन्ने कुरा हुँदैन् ? हामीले सबैलाई समान दृष्टिकोणका साथ निष्पक्ष भूमिका काम गर्नेछौँ ।